नेपाली काँग्रेसलाई मोटो रकम चन्दा बुझाएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत बनेका चौधरी सरकारी संस्थालाई टाट पल्टाउने र आफ्नो दूनो सोझाउने मध्येका एक हुन् ।
सरकारी संस्थालाई कौडीको भाऊमा लिएर मोलमोलाई गर्ने चौधरीले नेपाली जनताको लगानीमा रहेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको काम अवरुद्ध पारेर आयोजनालाई नै समस्यामा पारिदिएका छन् ।
चौधरीको स्वामित्वमा रहेको हिमाल हाइड्रोले साञ्जेनको ठेक्का लिएको थियो । मोटो रकम कमाई हुने लक्ष्यका साथ चौधरीले साञ्जेनको निर्माणमा भारतीय कम्पनी समेत भित्र्याएका थिए भने उनले निर्माणको काम गर्ने गफ समेत दिएका थिए । तर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा हिमाल हाइड्रो समस्यामा परेको भन्दै निर्माण गर्न समेत अटेर गर्दै आएका छन् ।
आफूलाई अर्बपति दावी गर्दै आएका चौधरीले ‘हिमाल हाइड्रो लिमिटेड’ नामक ठेकेदार कम्पनी आर्थिक रूपमा धराशायी हुँदै गएको बताएका छन् । नबिल बैंकमार्फत नेपाली जनताको निक्षेपमाथि खेलवाड गर्दै आएका चौधरीले सधै शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर सात खुन समेत माफी पाउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको निगाहमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत छुट लिएका चौधरीले पछिल्लो दिनमा साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई नराम्ररी धारासायी बनाइदिएका छन् ।
फितलो व्यवस्थापन र प्रभावकारी काम नहुँदा कम्पनी टाट पल्टिँदै गएको देखिएको छ । कम्पनीमा रकम अभाव हुँदै गएपछि कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन र काम गरेको भुक्तानी दिन समेत समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
हिमाल हाइड्रोले हाल ४२ दशमलव ५ मेगावाटको सान्जेन र २१ दशमलव ६ मेगावाटको तल्लो हेवा खोलामा काम गरिरहेको छ । यसले माथिल्लो भोटेकोसी लामासाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन मर्मतको काम पनि जिम्मा लिएको छ ।
पर्वतमा १५ मेगावाटको मध्ये मोदी र कास्कीमा ४४ मेगावाटको सुपर मादी दुई आयोजना आफैंले निर्माण गर्ने गरी अनुमतिपत्र लिएको छ । यता धराशायी हुँदै गएपछि चौधरीले कम्पनीमा भारतको कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेडलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याएको छ । उक्त भारतीय कम्पनी समेत भारतमा कालोसूचीमा परेको र सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोपमा कारावाहीमा परेको कम्पनी हो ।
नगद प्रवाहमा समस्या देखिएकाले जिम्मा लिएका आयोजनाको काम समयमा अघि बढ्न सकेको छैन । तोकिएको प्रगतिसमेत नभएको सो कम्पनीका एक प्रबन्धकले जानकारी दिए । ती प्रबन्धकका अनुसार बरु पैसा नै नभएका ठेकेदार निर्माण कम्पनीले सबै विषयलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउन सक्दो रहेछ, आफूलाई अर्बपति दावी गर्ने विनोद चौधरी त फटाहाको राजा भन्दा बढी रहेछन् ।
कुनै समय नेपालको पहिलो नम्बरमै गनिएको हिमाल हाइड्रो चौधरीले किनेपछि वा उनको व्यवस्थापनमा गएपछि निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।
बजारमा कम्पनीको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएपछि जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकले ठेक्का दिन छोडेका छन् । यहाँसम्म कि विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने कामदारलाई समेत समयमा ज्याला दिन नसकेको कम्पनीकै एक अधिकारीले बताए ।
केही महिनाअघि सान्जेनमा काम गर्ने मजदुरलाई तलब नदिँदा उनीहरूले महिनौंसम्म काम रोकेर आन्दोलन गरेका थिए । अहिले मजदुर समस्या साम्य पारे पनि कामको गति बढाउन सकेको छैन । यही कारण सान्जेनको विद्युत उत्पादन मिति प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।
सान्जेनको भूमिगत संरचना निर्माण गर्न सहायक ठेक्का पाएको हिमाल हाइड्रोले काम गर्न गोमा घिसिङसँग पेटी ठेक्का गरेको थियो । आफू त नेपालकै टप कम्पनी रहेको, अरु कसैले भेटन नसक्ने तथा कोही कसैले पनि हिमाल हाइड्रोसँग तुलना गर्नै नस्क्ने भन्दै उप्रिएका चौधरीकै कारण साञ्जेन डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबीच पटक–पटक सो विषयमा छलफल भएपनि कुनै निश्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चौधरीसँग नै छलफल गरेपनि समस्याको समाधान निस्कने बिन्दुमा नपुगेको बताइन्छ । चौधरीले उल्टै घिसिङलाई मतलब नगरेको बताइन्छ ।
साञ्जेनमा समस्या देखिएपछि आयोजना प्रमुख किरण श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनलाई समेत सो बारेमा जानकारी गराएका छन् । तर पुनले विनोदजी जस्तो प्रतिष्ठित व्यापारी र सांसदलाई के भन्ने कसो गर्ने भन्दै कान कन्याएर मात्रै बसेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीकाअनुसार ऊर्जा मन्त्री पुन र चौधरीबीच पछिल्लो समय व्यापारिक साँठगाँठ समेत रहेको छ । तत्कालीन माओवादीभित्र पैसाको खेलोफड्को गर्नेमा उनकै नाम आउने गरेको थियो ।
चौधरीको कम्पनीले भुक्तानी नदिएपछि पेटी ठेकेदारले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको थियो । तर, पछि आपसी सहमतिमा विवाद सल्टाइएको भएपनि हाल आएर उस्तै अवस्था देखिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
सान्जेनका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार हिमाल हाइड्रोले लभगभ निर्माण स्थल छाडिसकेको देखिन्छ । आयोजना स्थलमा एकाध मात्रै कर्मचारी रहेको बताइन्छ ।
भारतीय तथा नेपाली कम्पनी एसइडब्लु टुन्डी जेभीले मुख्य सुरुङ र भर्टिकल साफ्ट सुरुङ निर्माण गर्न हिमाल हाइड्रोलाई सहायक ठेक्का दिएको थियो । अहिले यो काम टुन्डी आफैंले अघि बढाएको छ । यद्यपि, मुख्य सुरुङ र छड्के भर्टिकल साफ्ट सुरुङको काम सुस्त छ ।
२ सय ५० मिटर लामो छड्के भर्टिकल साफ्ट सुरुङ पूरा गर्न हिमालले २ वर्ष लगाएको थियो । बाँकी २ सय ५० मिटर खन्न पनि त्यति नै समय लगाउने अवस्था देखिएको छ । यसो भए आयोजनाबाट समयमा विद्युत उत्पादन हुँदैन । हाल उद्योगपति चौधरीको पूर्ण स्वामित्वको यो कम्पनी आर्थिकरूपले टाट पल्टिएकाले काम गर्न नसकेको स्वयं त्यहाँका कर्मचारीको भनाइ छ ।
हिमाल हाइड्रो सिभिल संरचना निर्माण गर्न नर्वेले स्थापना गरेको कम्पनी हो । यही कम्पनीले नर्वेको लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्तीको सुरुङ खनेको थियो । नर्वेजियनले छोडेपछि नेपालमा यो कम्पनीले दर्जनौं आयोजनामा काम गरेको छ ।
तर, चौधरीको स्वामित्वमा आएपछि कम्पनी धराशयी हुँदै गएको हो । चौधरीको कारण आयोजना समस्यामा परेपछि त्यसको गुनासोसहितको उजुरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष समेत पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले के भएको हो बुझ्नु भनेर सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग समेत आफै मातहत राखेका प्रधानमन्त्रीले सोही विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा टेकेर भएपनि चौधरीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । नेपाली जनताको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनालाई डुबाएर गलत तवरले कुनै पनि काम नगर्ने कम्पनीलाई बोकेर राख्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छैनन् ।
नेपाली जनताको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा खेलो फड्को गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चौधरी भएपनि चौधरीको नाम लिएर आउने जो कोहीलाई पनि कारवाही गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । उनले समस्या के हो ? समाधान कसरी हुन्छ ? आयोजनाको काम ढिलो भएको हो ? कमजोरी कस्को हो ? भन्ने कुराको सम्पूर्ण फेहरिस्त उपलब्ध गराउन र कारवाहीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्री पुन र सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ल्याकत ऊर्जा मन्त्री पुनले राख्छन् कि कराख्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।
द्योगी विनोद चौधरी